China Chlorinated Polyethylene ho an'ny vokatra PVC mpanamboatra sy mpamatsy |Dehua
Chlorinated polyethylene (CPE) dia molekiola polymer akora vita amin'ny HDPE amin'ny alalan'ny chlorination amin'ny alalan'ny rano dingana fomba, ary ny rafitra manokana ny molekiola avo manome ny vokatra tonga lafatra fananana ara-batana sy simika.
Araka ny fampiharana ny CPE, zarainay ho vondrona roa izy ireo: CPE sy CM, ary mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa, ho an'ny vondrona tsirairay dia namolavola karazany maro izahay miaraka amin'ny tondro ara-teknika samihafa.
Ny vokatra plastika mahazatra:
Ny vokatra CPE dia karazana fiovan'ny fiantraikany amin'ny vidiny, ampiasaina betsaka amin'ny fanodinana vokatra henjana sy semi-malefaka, toy ny profil PVC henjana, fantsona, fantsona fantsona ary tontonana.Ny CPE dia afaka manatsara ny tanjaky ny fiantraikan'ny vokatra vita amin'ny PVC.
Amin'ny maha-elastomer tonga lafatra, CM dia azo ampiasaina amin'ny famokarana vokatra fingotra malefaka.
Ny CPE dia manana fahaiza-manao feno famenoana avy amin'ny vovoka magnetika ferrite, ny vokatra fingotra vita amin'ny magnetika vita amin'izany dia hanana fahaleovan-tena tsara ambany, ary azo ampiasaina betsaka amin'ny vata fametahana vata fampangatsiahana, karatra andriamby sns.
lelafo mahatohitra ABS
CPE ny tenany dia misy chlore, ary manana amin'ny lelafo retardant, ary mihatra amin'ny raikipohy ny lelafo mahatohitra ABS, manampy ny sasany CPE amin'ny fomulation ny ABS, tsy afaka misoroka ny fahaverezan'ny fananana ara-batana vokatry ny fampidirana be loatra inorganic lelafo retardant, fa koa afaka manatsara ny lelafo mahatohitra ny rafitra manontolo.
Ny orinasanay dia manome mari-pahaizana mahazatra valo amin'ny CPE, izay mandrakotra ny lanjan'ny molekiola samihafa, ny votoatin'ny chlorine ary ny kristaly, mba ahafahantsika mamaly ny filan'ny mpanjifa matihanina.
Ny votoatin'ny chlorine % 35±2 35±2 35±2 35±2 36±1 35±2 35±2 41±1 25±1 25±1
Hafanan'ny Fusion J/g ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 20-40
Faharetana amin'ny sintona Mpa ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥6.0 ≥6.0 ≥8.0 ≥8.0
Sieve sisa tavela (20 mesh) % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
Particle tsy ferrous Pcs/100g ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤20 ≤40 ≤40 ≤40
MI21.6190 ℃ g/10 min 2.0-3.0 3.0-4.0 5.0-7.0
Izy io dia manana lanja molekiola avo indrindra, fizarana lanja molekiola tery ary fananana mekanika tsara, ampiasaina betsaka amin'ny vokatra PVC henjana sy semi malefaka. PVC varavarankely profil, fefy, fantsona, birao sy trano miforitra lovia sns.
Miaraka amin'ny lanjan'ny molekiola avo sy ny fizarana lanja molekiola mety, ary mitovy amin'ny Tyrin 7000. PVC varavarankely profil, fefy, fantsona, birao sy trano miforitra lovia sns.
Miaraka amin'ny lanjan'ny molekiola mety sy ny fizarana lanja molekiola midadasika, ny hafainganam-pandehan'ny plasticizing antonony. Extrusion haingana ny profil varavarankely PVC.
Miaraka amin'ny lanjan'ny molekiola mety sy ny fizarana lanja molekiola midadasika, plastika haingana. Extrusion haingana ny profil varavarankely PVC.
Ny lanjan'ny molekiola mahazatra sy ny fizarana lanja molekiola tery, ary ny plastika dia haingana, ary mitovy amin'ny Tyrin3615P. PVC varavarankely profil, fantsona, tsindrona Fittings sy ny hany fitaovana sns.
Ny lanjan'ny molekiola ambany sy ny fizarana lanja molekiola tery, ary mitovy amin'ny Tyrin6000. Sarimihetsika, profil, tsipika famehezana ary tokana sns.
Ny lanjan'ny molekiola ambany sy ny kristaly, dia mifanaraka tsara amin'ny ABS, ary miaraka amin'ny fampandehanana tsara indrindra, ampiasaina amin'ny vokatra modely, afaka manatsara ny fanoherana ny lelafo sy ny hamafin'ny fiantraikany.
Ho an'ny fitambarana ABS mahatohitra lelafo.
Low molekiola lanja sy ambany crystallinity PVC film sy taratasy.
Ny votoatin'ny chlorinate ambany sy ny kristaly, ary mitovy amin'ny Tyrin2500P. PVC varavarankely profil, fefy, fantsona, birao sns
Ny votoatin'ny chlorine ambany sy ny kristaly avo lenta, dia mifanaraka tsara amin'ny plastika amin'ny ankapobeny, ohatra PE. Manatsara ny fahombiazan'ny plastika amin'ny plastika ary manatsara ny fanoherana ny fahanterana, toy ny fanoherana ny hafanana ambany sy ny fanoherana ny ozone.
teo aloha: Vidin'ny ambongadiny Shina hoso-doko gorodona tsy tantera-drano ho an'ny simenitra - Famafazana Polyurea Elastomer (SPUA) – Dehua
Manaraka: Polyethylene chlorinated ho an'ny vokatra andriamby